Myanmar – 2008 Christmas – Thet Nandar
Category: Myanmar – 2008 Christmas
2008 X’mas Home Deco
တစ်နှစ် အရွယ် သားသား ကောင်းစေတစ်ယောက် …. မာမီ အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်နေတဲ့အချိန် …. ဒီ ရေကူးကန် လေဘောလုံးထဲမှာ ဘောလုံးတွေနဲ့ ဆော့ … ပီးရင် တီဗီက လာတဲ့ ကာတွန်းကား ကြည့်တယ်။ နည်းနည်း ကြီးလာ၊ အရပ်လေး ရှည်လာတော့ ဒီလေဘောလုံးကို ကျော်ခွပီး အပြင်ကို မရောက် ရောက်အောင် ထွက်တတ်နေလို့ မျက်စိကို တစ်ချက်လေးမှ အလွတ်မပေးပဲ ထိန်းခဲ့ရသော သားသား ကောင်းစေ …. မမ က သားသား ကစားဖော်ပေါ့ …. ဒါ ဧည့်ခန်းထဲက Christmas tree ပါ။ သူ့ကို ၂၀၀၁ ကတည်းက ၀ယ်ထားတာလေ။ သမီးလေး Angel တောင် မမွေးသေးပါဘူး။ […]
Read More 2008 X’mas Home Deco